Saitama စီရင်စုအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် [Genvers] ကွင်းဆင်းအလုပ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်နေရာ
"Saitama Prefecture" အပါအဝင်တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားရှိအလုပ်နေရာများစာရင်း
၎င်းသည် Saitama စီရင်စု၏သော့ချက်စာလုံးဖြင့်ရှာဖွေထားသောအလုပ်၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။အလုပ်ဒေတာဘေ့စမှ"Saitama"အပါအဝင်အလုပ်စာရင်းများပြသခြင်း။
အခြေအနေ setting ⇒ [Saitama Prefecture]
(1-30) / 102
Ryoke, Ageo စီးတီး, Saitama စီရင်စု
Asaka City, Saitama စီရင်စု
Sakado City, Saitama စီရင်စု
Kawase Juku Co. , Ltd.　အလုပ်များကြည့်ပါ
Kuei စီမံကိန်းရုံး GKအလုပ်များကြည့်ပါ
Wako City, Saitama စီရင်စု
[၁၀ တန်၊ နောက်တွဲယာဉ်] အကြီးစားစက်ကိရိယာများအားမောင်းနှင်သည့်ယာဉ်မောင်းကိုခေါ်ယူခြင်း★အတွေ့အကြုံနည်းခြင်းနှင့်လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုကြိုဆိုပါတယ်★အလုပ်များသောကြောင့် "အရေးပေါ်စုဆောင်းမှု / ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ"
Kanto areaရိယာတစ်ခုလုံးနှင့်,ရိယာအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကပံ့ပိုးပေးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်မြေပြင်ကိုတိုးတက်စေပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုရရှိသည်။ အလုပ်များကိုနေ့စဉ်ကြေညက်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့နေသည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုတောင်မှသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်။
လစဉ်ယန်း ၃၀၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောလစာဖြစ်နိုင်သည်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလရှိသည်။ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ဦး စားပေးကုသမှု
Ichikawa City, Chiba စီရင်စု
[ရုံး] ၁၃၁၆ Motoyuki၊ Ichikawa-shi, Chiba စီရင်စု၊ တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃၊ Saitama စီရင်စုနှင့်အခြားအနီးအနားဒေသများ။
Sasaki Heavy Machinery Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Hanno City, Saitama စီရင်စု
Kojima Gumi ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများကြိုဆိုကြသည်!မင်းကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စနိုင်အောင်မင်းကိုကောင်းကောင်းသင်ပေးမယ်။ [ဆိုက်] Tama ဒေသ၊ တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးနှင့် Saitama စီရင်စုများကဲ့သို့သောနေရာများစွာရှိသည်။straight ★အတွေ့အကြုံရှိသူများသည်သူတို့၏ယခင်အတွေ့အကြုံကိုအသုံးချပြီးသူတို့၏စွမ်းရည်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ★အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများအတွက်လက်မှုပညာ၏အကူအညီဖြင့်စတင်ပါ။
①ပုံသဏ္erာန်လက်သမား [အတွေ့အကြုံရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ ၁၈၀၀၀ ယန်း ~ အပိုပစ္စည်းများ②ပုံကြိုလက်သမားလက်သမား [အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း] နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ③အလယ်အလတ်နှင့်ကြီးမားသောကားမောင်းသူလစဉ်လစာ ၄၀၀၀၀၀ ...
Higashikurume စီးတီး, တိုကျို
Eguchi Komuten Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Tobi Nitta Gumi ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
☆အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု! the ဒီနည်းလမ်းကိုအစကတည်းကကြင်နာစွာနဲ့ယဉ်ကျေးစွာသင်ကြားပါ။ scr ခြစ်ရာမှသည်အတွင်းပိုင်းအထူးကုများအထိ! hard အလုပ်ကြိုးစားမှုကိုလစာဖြင့်အကဲဖြတ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
<Earn> <Resting> [အကြီးစား / အလတ်စားယာဉ်မောင်းများ] မျက်နှာချင်းဆိုင်အလုပ်များနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအနည်းငယ်သာ◎လက်ရှိအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နေသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်များစွာရှိပါသည်။ အသက် ၂၀ မှ ၆၀ အထိကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တက်ကြွစွာ!
၎င်းသည်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများ (သံမဏိထုတ်ကုန်များ၊ သံမဏိပစ္စည်းများ၊ သံမဏိဘောင်များ၊ ကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန်များစသည်တို့) ကိုလက်ဖြင့်သယ်ခြင်းမရှိဘဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ကားကြီးတစ်စင်းရွှေ့ဖို့အလုပ်ပဲ၊ ဒါကြောင့်ငါလုံခြုံရေးကိုပိုပြီးဂရုစိုက်တယ်။အဆိုပါကုသမှုလည်းကျေနပ်စရာပါ!ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောစရိတ်များဖြင့်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောယူဆောင်မှုကိုကတိပေးသည်။သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တောင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးရင်တောင်အကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့ဂရုတစိုက်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်, အမျိုးမျိုးသောအရည်အချင်းများကိုဆည်းပူးရန်ထောက်ခံမှုစနစ်လည်းရှိပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်း (ကားကြီးကြီး၊ အလတ်စားကား၊ ယူနီကား၊ နောက်တွဲယာဉ်)
[အကြီးစား / အလတ်စားအရွယ်အစား] လစဉ်လစာယန်း ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀ * အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကြေးများ * အရည်အချင်းများကိုဆည်းပူးခြင်းနှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ခြင်းဖြင့်သင် ပို၍ ပင်ရနိုင်သည်။
Honjo City, Saitama စီရင်စု
294-1 Yoshida Hayashi, Kodama-cho, Honjo City, Saitama စီရင်စု
ကြိုတင်ချေးယူခြင်း / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေခြင်း ok (အလုပ်ချိန်အတွင်း) ★နေ့စဉ်ဆွေးနွေးချက်★ကျောင်းသားများ / အချိန်ပိုင်းလုပ်သားများ / အတွေ့အကြုံရှိသူများ - မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာမိန်းကလေးများ!ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်အရွယ်မရွေးလူများအားရှာဖွေနေသည်။တစ်ခုခုကိုတိုင်ပင်!လျှောက်ထားရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။သူဟာဘာမှပြောစရာမလိုဘဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအဓိကထားပြီးအလုပ်ခန့်ထားလို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောသမ္မတဖြစ်သည်။
☆★☆အတွေ့အကြုံမရှိပါ။သင်တို့အားငါပြောမည်။ earn ★☆☆★ earn ၀ င်ငွေ၊ အလုပ်ရလိုသူသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားသူများ weekly ★☆☆★ weekly အပတ်စဉ်ပေးချေချင်သောသူများ their သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုယုံကြည်သောသူများ☆★☆စီမံကိန်းအများအပြားနှင့်အတူတည်ငြိမ်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါကမိန်းကလေးများအဆင်ပြေပါသည်။ ♪မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ♪
◆အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၂၀၀၀ ~ အရည်အချင်းများနှင့်အရည်အချင်းများကိုသုံးသပ်ခြင်း ဦး စားပေးကုသမှု ex အတွေ့အကြုံ - နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ ◆အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှု * နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုညှိနှိုင်းခြင်း♪ ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုတင်တိုင်ပင်ပါ။ ★လုပ်ငန်းခွင် ...
Nakamaru, Kitamoto City, Saitama စီရင်စု
ကန်တိုareaရိယာတစ်ခုလုံးသည် Saitama စီရင်စုတွင်ဗဟိုပြုသည်။ * တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်အပြန် (ညှိနှိုင်း)
★ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ရန်ဆွဲဆောင်သောအချက်များ!local ဒေသခံ Saitama သို့သာပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုပါ။၎င်းသည်ကြာရှည်တည်မြဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြင့်အလုပ်တစ်ခုရရှိရန်သင်၏အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။・ အပြည့်အဝထောက်ခံမှုစနစ်!ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအရကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားကူညီပေးပါမည်။ ★အတွင်းပိုင်းခွဲထားသောစနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ကုသမှုသည်မန်နေဂျာတ ဦး နှင့်တူညီသည်။အလုပ်ကြိုးစားမှုပမာဏသည်ဝင်ငွေတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုထင်ဟပ်နေသည်။
Hidaka City, Saitama စီရင်စု
Tobiken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
◆အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးလုပ်ငန်းသည် ၀ န်ထမ်းများစိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ ၀ င်ငွေရှာနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ငါများစွာသောဆိုဒ်များနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေတယ်, ငါ့အလုပ်အမြဲစဉ်ဆက်မပြတ်ပါ!အဆိုပါအဆောင်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည်နှင့်သင်စိတ်ချစွာအနားယူနိုင်ပါတယ်! →အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောကုသမှုကိုခံယူပြီးသင့်ကိုအလုပ်ထဲသို့အပ်နှံပါမည်။ →အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်အကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းများကသင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးမည်။
Taiyo Geotech Co. , Ltd.
[ကြီးမားသောအမှိုက်ကားမောင်းသူ] အလုပ်များသောကြောင့်အရေးပေါ်လူသစ်ခေါ်ယူခြင်း။ချက်ချင်းမွေးစားခြင်း! !!
အသက် ၂၀ မှ ၅၀ အတွင်းအမျိုးမျိုးသောမျိုးဆက်ဝန်ထမ်းများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။တိုက်ခိုက်ရန်အဆင်သင့်ရှိသောလူလတ်ပိုင်းအရွယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။
ယန်း ၁၄၀၀၀ မှနေ့စဉ်လစာ
[ရုံး] 2-4-19 Higashi Ayase, Adachi-ku, တိုကျို [ကားဂိုဒေါင်] Yashio City, Saitama စီရင်စု
Taiyo Geotech Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
၎င်းသည်အလုပ်များစွာဖြင့်အလုပ်များစွာကိုသင်ရရှိနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။အတွေ့အကြုံရှိသောသူများသည်သူတို့၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့၏လစာကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။သင်ကအတွေ့အကြုံမရှိသေးရင်တောင် support system ကပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ (နည်းပညာကို scratch မှသင်ယူပါ)